Cirjiidh (Saturn) iyo Saxal-cade (Jupiter) oo markale aad isugu dhowaadey moddo laga joogo 800 oo sano ayaan xalay dhaayaha saaray salaadii makhrib ka dib. - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Bulshada Cirjiidh (Saturn) iyo Saxal-cade (Jupiter) oo markale aad isugu dhowaadey moddo...
Cirjiidh (Saturn) iyo Saxal-cade (Jupiter) oo markale aad isugu dhowaadey moddo laga joogo 800 oo sano ayaan xalay dhaayaha saaray salaadii makhrib ka dib.
December 21 oo xalay ahayd ayey labada meere ee Cir-jiidh (Saturn) iyo Saxal-cade (Jupiter) ku kulmeen kulankoodii inta la garanayo ay isugu dhowaayeen taas oo dhacday mar laga joogo 800 oo sano. Cir maalada iyo xidigo yaqaanadu waxay joogteeyaan aadna ugu dhabo galaan kulanadda ama isku beegnaanta meerayaasha iyo felegyada fagaaga sare sameeyaan taasoo ay diiwaan geliyaan. Iskuna dayaan in ay fahmaan dhacdooyinka iyo saamaynta ay keenaan.
Maluugta ama siyaariinta oo inta layaqaan lagu muransanyahay tirada dhabta ah ee ay ka kooban yihiin ayaa mararka qaarkood isku saf noqda sida badanaa la ogyahay labadan meere oo ah kuwa ugu waaweyn bahda cadceedu waxay isku saf noqdaan 20 kii sanadoodba mar.
Hayeeshee fogaanaha ay isu jirsadaan ayaa kala duwan oo tii xalay waa kii ugu dhowaa inta la og yahay. Waxayna u muuqdeen inay hoosta iskaga jiraan waxayse isu jireen 730 milyan oo kiiloo mitir. (730 million kilometers.) hayeeshee isku saf noqodkoodii u danbeeyey wuxuu dhacay May 28, 2000, waxayna isu jireen fogaan dhan 68.9 arc minutes, ama in ku laba jibaaran dhexroorka dayaxa oo dhamays ah.
Kala duwanaantu 2020 ku waa isu dhowaan weyn maxaa yeelay cidhifka woqooyi ee aduunka maalintu way ka yartahay cidhifka koonfureed ee aduunkana way ka dheertahay isku saf-noqodkoodaasina wuxuu ahaa 6.1 arc minutes. “xalay qofkii haystey telescope, wuxuu awood buuxda u lahaa in uu arko girgirada cirjiidha (Saturn) iyo dayaxyada saxal cade (Jupiter)”
Markii markan oo kale ahayd ee ay aad isugu dhowaadaan wuxuu ahaa July 16, 1623, markaa oo uu noolaa cir-maalkii Galileo, markaa oo tobanayeeyo sanadood ka dib ahayd markii uu adeegsadey telescope. Taasoo uu ku daah-qaaday afarta dayax ee ugu waaweyn dayaxyada saxal cade (Jupiter) kuwaa oo wada-jirkooda isaga loogu magic daray.
Badanaa labadan meere isku saf ahaantooda nasiib looma yeesho in la arko maxaa yeelay waxay ku dhow yihiin cadceeda. Hayeeshee inta la diiwaan-geliyey kulankoodii kanoo kale ahaa wuxuu dhacay March 4, 1226. “markaa oo ahayd wakhtigii uu Genghis Khan dadka ku gumaadeyey qaarada Asia.
Inkasta oo xalay si weyn loogaga il sugtay qalabka binoculars iyo Telescopes, misna isha qaawan qudheedu way aragta iyagoo hoosta isaga jira oo cirjiidhu(Saturn) ka baaxad weyntahay saxal cade(Jupiter) kana cad-yahay oo midabkiisu yahay caddaan saafi ah halka saxal cade (Jupiter) uu midab dahabi ah lahaa.Sida la odorosayo March 15, 2080, ayay markale isku saf-noqon doonaan taasoo laga yaabo in da’yarta xalay aragtay ay markale u suuro gasho in ay arkaan.
WQ: Xassan Maxamuud Dhiilood
Previous articleChief abducted by suspected Al-Shabaab militants in Wajir
Next articleSomaliland oo aqoonsi lacag uga bedelaneysa dalka Malaawi